ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် လေကိရိယာတွေ သုံးကြတာလဲ။ - FAQs | ထိုင်ဝမ်တွင် 47 နှစ်ကြာ Handheld Air Tools & Pneumatic Tools | GISON
GISON Machinery Co., Ltd. Air Tools, Pneumatic Tools, Air Wrench, Air Grinder, Air Sander, Air Polisher, Air Hammer, Air Drill, Air Screwdriver, Air Cutter, Vacuum Suction Cup... စသဖြင့် မော်ဒယ် 500 ကျော်ရှိပါတယ်။ GISON အထူးသဖြင့် ဥရောပ၊ အမေရိကနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်ရှိ ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး မော်တော်ကားပြုပြင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အလှဆင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သတ္တု/သစ်သား/ကျောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ် ဈေးကွက်တင်ထားသည်။
ထိုင်ဝမ်တွင် (၄၇) နှစ်ကြာ လေကိရိယာနှင့် အမှုန်အမွှားကိရိယာများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူ
Air Tools / Pneumatic Tools များသည် လေမော်တာကို အလုပ်လုပ်စေရန် တွန်းအားပေးသော လေကို ကွန်ပရက်ဆာမှ ပံ့ပိုးပေးသော လေကို အသုံးပြုသည်။ မီးလောင်လွယ်သော၊ ပေါက်ကွဲနိုင်သော၊ ဖုန်ထူသော၊ စိုစွတ်ပြီး ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခေတ်မီစက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း၊ မော်တော်ကား၊ လေယာဉ်ပျံစသည်ဖြင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မညစ်ညမ်းစေဘဲ တာရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်သော သက်တမ်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အလှဆင်ခြင်း၊ သတ္တု / သစ် / ကျောက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ဖြန်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း နှင့် အခြားနေရာအများအပြားတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ခေတ်မီသော အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Pneumatic ကိရိယာများတွင် အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။
1. သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးသော ကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုပ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် ပါဝါကိရိယာများ၏ သတ်မှတ်ချက်တွင် လေကိရိယာများ။
2. Air tools များသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် ပိုမိုသင့်လျော်ပြီး မော်တာအပူလွန်ကဲခြင်းကဲ့သို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
3. လေခွင်းအားလျှပ်စစ်မော်တာ၏ pneumatic tool သည် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကဲ့သို့ ဝန်ပိုနေသော်လည်း လျှပ်စစ်မော်တာကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ဝန်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်၊၊
4. Pneumatic ကိရိယာများကို လျှပ်စစ်အတွက် အသုံးမပြုရ၊ ဖိအားရင်းမြစ်ဖြင့်သာ၊ ရေခံနိုင်ရည်အားကောင်းသည်၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်မှု မရှိသည့်အပြင် လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကိရိယာသည် မီးပွားများမထွက်လာဘဲ၊ ပေါက်ကွဲတတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးချနိုင်သည် (ဥပမာ၊ Kouang၊)။ ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင်၊ ၎င်းသည် အခြားကိရိယာများထက် ဆိုးရွားသောပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သော်လည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း (ဥပမာ- ရေသန့်စင်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဆီဖြည့်ခြင်းစသည်) ကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
5. Air tools များနောက်ဆက်တွဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များသည် ပါဝါကိရိယာများထက် နည်းပါးသည်။
6. ပါဝါကိရိယာများ၊ လေကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အစောပိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် ပါဝါကိရိယာများ (လေကွန်ပရက်ဆာများနှင့် လေလိုင်းများ) ထက် ပိုများသည်။